कस्तो चलन -९ एक युवकले स्प्राइट भनेर बिष पिएपछि के भयो ? (भिडियोमा हेर्नुहोला ) – Complete Nepali News Portal
June 22, 2017	569 Views
झापा दमक । कस्ताे चलन नामक नेपाली कमेडी भिडीयाेमा समसामयिक घटनालाई समेटेर त्यसलाई ब्यङ्ग गरि प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । यो भाग–९ मा एउटा अनौठो कुरालाई लिएको छ । एक युवकले इस्प्राइट भनेर बिष पिएका छन् तर किन र कसरि भयो यो सब ? अर्का युवक झोक्राएर बसेका छन् । धेरै पिडा भएर हो या के झुकीएर पिएका हुन् ? (भिडियोमा हेर्नुहोला )
यो कमेडी भिडियो नेपालको पुर्बी भाग दमक बाट निर्माण गरिन्छ ।यो भिडियोमा दिपक राज जोशी ,राजन बुढाथाेकीको अभिनय रहेको छ ।ज्ञानेन्द्र काेइरालाकाे छायांकन रहेको यो भिडियोलाइ सम्पादन तथा निर्देशन शिशीर बुढाथाेकीले गरेका छन् ।
कमल ओलीको स्वर र संगितमा “चर्कायौ यो छाती” (भिडियो सहित )
पुश्कल शर्मा र मुना थापा मगरको आवाजमा फेरी आयो मार्मिक गित “छोटो जिवन ” सार्वजनिक